XIKOO Industrial Co, Ltd. ndeimwe yeakakura emhepo anotonhorera mugadziri muChina, iyo yakatsaurira mune yakaderera kudyiwa uye nharaunda inoshamwaridzana evaporative mweya inotonhorera R&D uye dhizaini, kugadzira, kushambadzira, kutengesa uye sevhisi kubva 2007.iri muPan Yu dunhu, Guangzhou. guta. pamwe nyore Yekutakura kuwana.
Kupfuura zvinopfuura gumi neshanu zvigadzirwa zvitsva zvinokudziridza uye zvekare mamodheru kukwidziridzwa, kune anopfuura makumi maviri marudzi emamodeli eakasiyana application. XIKOO main zvigadzirwa zvinosanganisira inotakurika mweya inotonhorera, maindasitiri emhepo anotonhorera, hwindo mweya inotonhorera, centrifugal mweya inotonhorera, rezuva DC mhepo inotonhorera uye mhepo inotonhorera zvikamu.widely inoshandiswa kumba, hofisi, zvitoro, chipatara, zviteshi, tende, girinihausi, restaurant, workshop, imba yekuchengetera nedzimwe nzvimbo.
Ndedzipi mhando dzeindasitiri mhepo inotonhorera mumidziyo inotonhorera michina, uye poindi poindi?
Pakati pemidziyo inotonhorera yemiti, pane zvakawanda zvakatemwa uye mamodheru evaporative mhepo inotonhorera, akasiyana mamodheru uye maratidziro, kudhura kwemitengo mumusika wekutengesa, uye akasiyana maficha. Icho chirimwa chinotonhodza michina ine yakanyanya kusarudza. Seyekare bhizinesi bhizinesi ...
Iko chaiko kutonhora mhedzisiro kwakanyanya zvine chekuita nekugadzirwa kwekugadzwa kwemaindasitiri mweya unotonhorera. Mukugadzirwa kweindasitiri mhepo inotonhorera chirimwa kutonhora scheme, iwe unofanirwa kunzwisisa maitiro ekuverenga huwandu hweshanduko yemhepo mumusangano uye maitiro ekuisa akakodzera evaporative indasitiri mweya c ...